Goncharova wakwazi ukwakha an amazing, omunye angase athi ngisho, okuwukuphela kwendlela izincwadi - Ilya Oblomov. Zonke umsebenzi uhlukile, azikho amajika elibukhali ngesakhiwo, isimo cishe ngeke zishintshe (lonke ingxenye yokuqala kwaba efulethini protagonist), kodwa usakhathazekile for abalingiswa. Lesi sithombe, njengoba Oblomov, abakwazi kodwa kubangele izingxabano ngesimilo sakhe, ngokuqonda ukuphila.
Esikhathini inoveli abaphakamisi ngezepolitiki lapha kuthinta izingxabano futhi obudlelwana sohranayut efanele kunoma iyiphi inkathi kuphela. Roman Goncharov ezifundiswa esikoleni, nokubhala Tindzaba ku Oblomov elwe in uhlelo etemibhalo. Kukhona imibuzo ebalulekile uhlamvu zokuziphatha ezenza umfundi sizindle ukufunda.
Izihloko lusebenza ku "Oblomov"
Uhlu izihloko bamenyiwe ukuba babhale indaba, kuyinto ehluke ebanzi, ngakho okulandelayo izokwethulwa ezithakazelisa kakhulu.
"I love indaba ephathwayo emsebenzini" Oblomov ".
Indzaba ku "Oblomov futhi Stolz."
"Umqondo zomlando nefilosofi kule noveli" Oblomov ".
"Oblomov futhi" Oblomovism ".
"Oblomov wakhula enovelini" Oblomov ".
Ubuhlobo Oblomov futhi Stolz
Indzaba ku "Oblomov futhi Stolz" kokubili elula neyinkimbinkimbi ukubhala. Ngenxa nje yokuthi kuyinto izinhlamvu ezimbili eziyinhloko elinezinhlamvu elikhanyayo esimisiwe, izimiso ecacile neqondakalayo zokuphila. Kodwa ubungane babo akulula njengoba ungase ucabange.
Phela, nabo basuke hhayi kuphela nenhlonipho futhi sazise nomunye, kodwa kuhluke ngokuphelele, nokuthi awukwazi kodwa kuthinta isimo sabo maqondana ukuphila nomunye. Uma Ilya ezinye sikhathi sokuphila kwakhe ezama ukuthatha umbono komngane wakhe, khona-ke u-Andrew ngokucijile ugxeke "Oblomoffdom" futhi akusho sizame ngisho nokuzama ukuqonda ukuthi kungani Ilyu Ilicha bakhangwa reclusive ngakho.
Kodwa lokhu akubavimbeli ukuba uhlale labangani asondelene nabo kanye kuphela ukuphila kwabo konke. Phela, kuphela Stolz Oblomov wayengatshela ngesimo sazo, nokuthi, esikhundleni salokho, uhlale ekulungele ukusiza umngane.
Inkulumo ku "Oblomovism"
Indatshana ku "The Life of Oblomov" Ngeke ezahlukene ezinye zezenzakalo ezivelele ukuthi kungenzekani umlingisi losemcoka, kodwa kuyoba mnandi kanjani babengalingani izimiso esibalulekile protagonist. incazelo yangempela yokuphila kakhulu futhi kunembile Ili Ilicha wase enika umngani wakhe Andrey Shtolts - "Oblomovism".
Indzaba ekucabangeni Oblomov sika kuyehluka kuneminye imisebenzi ngenxa yokuthi ukugcizelela okukhulu enovelini yiso emhlabeni kwangaphakathi umlingiswa oyinhloko. Yiqiniso, ebabuza nabanye abalingiswa, kakhulu, itshela, kodwa Oblomov wadala ukuze ukuphila kwakhe abakwazi kube nentshisekelo kakhulu umfundi.
ebaluleke kakhulu kangakanani ukuqonda izizathu ezenza unesifiso esinjalo ubumfihlo kanye ukugeleza okuyisidina zokuphila. Futhi isizathu itholakala esengumntwana, lapho nsuku zonke kwaba zicishe zifane, lapho abazali bakhe ungalilahli umthwalo ngokwabo ngezinto sina noma imicabango, futhi kwasijabulisa.
Kodwa uma indodana kwakunjani kubo, khona-ke besingeke siyicabange ngamazwi Stolz babengeke baqonde ngaye ngokwakhe, ukuthi izikhathi sezishintshile, ukuthi ukuphila akulona ngempela lesifanele. Kodwa ngoba Oblomov wafunda basuke bengekho emakhaya, ke okhulise isimiso yamafilosofi, samenta reflections ahlukahlukene.
Kodwa naphezu kwazo zonke imizamo eyolanda umngane Stolz kusukela ukugeleza okuyisidina wokuphila, Oblomov namanje wabuyela izimpande zawo. Ngenxa isisekelo ubuntu bakhe, futhi kwaba okuyisidina, lonwabu, umuzwa ezolile ngendlela elinganisiwe zokuphila futhi isenzo.
Kuhlola ubuntu protagonist
Njengoba kuzoba indzaba nzima ku Oblomov ukunikeza abanye ukuhlolwa ocacile abalingiswa emaphakathi. Ngakolunye uhlangothi, ekuphileni okunjalo akulungile ukuthi abantu kancane kancane bahlukane nakho ukwenza izinqumo ezivuthiwe, ukuthola ivila, hhayi ngenjongo. Kancane kancane, ukuthuthukiswa yakhe siqu zingayeka ngenxa embuthanweni ewumngcingo abangane, omncane izithakazelo. Phela, self kudingeka amandla nesiyalo, ukuthi nale ndlela yokuphila nje iphele. Ngakho-ke, Ili Ilicha, futhi kwakukhona ukungabaza isifiso ukushintsha indlela yabo yokuphila.
Kodwa, ngakolunye uhlangothi, ukwakheka ubuntu bakhe kakhulu kuthonywa imvelo kanye nemvelo lapho akhulela khona. Futhi lo muzwa ezolile, ukuzinza wayesehlanganyela nama ngendlela elinganisiwe zokuphila. Ngaye, luhlala i ekahle, ngakho ekupheleni inoveli, naphezu kwayo yonke imizamo Stolz no-Olga, abuyele ifilosofi yakhe endala.
Endabeni ku Oblomov, ungase futhi ucacise ukuthi isibonelo Oblomovs ubonisa indlela wangaphambili indlela ahlukile zokuphila wakhala ukuthi abantu babe abafunde kakhulu, futhi intuthuko wayethola ukulima. Oblomov futhi Stolz babe ibonisa imibono yomphakathi eyayivamile lizwe phakathi naleso sikhathi eziphikisanayo. Ngakho-ke, naphezu yokuntuleka ezihlukahlukene izinhlamvu nezimo ezishintshayo, le noveli waba zakudala, ogama ukuhlobana ngokuhamba kwesikhathi, siyaqhubeka iqhubeka.
Ingqikithi Social yomuntu ngenxa izidingo zayo zokuphepha, self-actualization, indawo efanele yokuhlala, ukuqonda
Tale mayelana nemvelo emvelweni
Afrika - nezwekazi ezishisa
Uyini Arabesque? Incazelo kanye nencazelo yegama elithi "Arabesque"
Obumavukuvuku e Istanbul
Anemones zokutshala nokunakekela
Iqhaza abadlali: "Step Up 4"
Lavage esiswini: ubuchwepheshe, algorithm. Izindlela lavage esiswini
Izinwele Red: kungani kufanele anqume futhi yini upende ukukhetha
Ultrasound the scrotum
Ikotishi eshaweni - inhlanzeko nenduduzo
Esikhundleni ukulungiselela "Artra" nozakwabo. "Artra": ukubuyekezwa kanye namanani